“ဝေးလျက်ပင်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » “ဝေးလျက်ပင်”
တစ်နေကွယ် သေနယ်ကူးကြမဲ့အရေး တစ်နေ့တစ်နေ့ နေထွက်လာလိုက်၊ နေဝင်သွားလိုက်နဲ့
ကျွန်မတို့ မဆုံးတေးတွေသီနေသလိုပါပဲ။ ကိုစိန်သော့ရိုက်တဲ့ နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်မ
စဉ်စားနေမိတာပါ။ နောက်ကိုပေါက်ရဲ့နေထွက်ချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း ထပ်မံ အတွေးတွေ
ပွားမိပါတော့တယ်။ ( ဒါကြောင့် ဒီပုံလေးနှစ်ပုံကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးယူသုံးခွင့်ပေးပါနော်။)
ဟို အပေါ်ဆုံးပုံကတော့ ပိုင်ရှင်မသိတော့ပါ။ ဆိုက်တစ်ခုခုက ကူးမိပါတယ်။ မသိသူရေ..ကျေးဇူးပါနော်။
အင်ထရိုကကြာနေပြီ။ ဒီလိုပါ။ကျွန်မ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်ရဲ့ဒီကဗျာလေးဖတ်ပြီး ခံစားမိတာလေးမျှဝေချင်လို့ပါ။
ဒီကဗျာလေးကို ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် (၁၉၈၄) မှာရေးခဲ့တာပါ။
ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက စာမကြိုးစားရင် မြန်မာစာဆရာကြီး ဦးမြသန်းက
“မင်းတို့တွေ ငယ်စဉ်အခါပညာ ကြိုးစားရမှာကွ။ အသက်ကြီးမှ ကျောင်းနေချင် စာဖတ်ချင်နေလို့
မရဘူး။ ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုက်ချင်ရင် အမိုက်နင့်ပြင်ရှိသေးရှာလိမ့်လား။ ခွင့်သာဆဲမှ မခဲချင်ရင် တစ်လွဲ
နင့်ပြင်ရှိသေးရှာလိမ့်လား။ ခွင့်သာတုန်းမှ မရုန်းချင်ရင် အရှုံးနင့်ပြင်ရှိသေးရှာလိမ့်လား။”
လို့ ခဏခဏ ရွတ်ပြလွန်းလို့ ဒီစာသားတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီတုန်းကလယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ စာလို့ ဘယ်သိပါ့မလဲ။ ကိုယ့်ငယ်ဆရာ လက်တမ်းရွတ်ပြတဲ့
အတန်းလေးရလာတော့မှ (ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုက်ချင်ရင် အမိုက်နင့်ပြင်ရှိသေးရှာလိမ့်လား။ ခွင့်သာဆဲမှ မခဲချင်ရင် တစ်လွဲနင့်ပြင်ရှိသေးရှာလိမ့်လား။ ခွင့်သာတုန်းမှ မရုန်းချင်ရင် အရှုံးနင့်ပြင်ရှိသေးရှာလိမ့်လား။) စာသားတွေ
ကို ရေးသားခဲ့သူဟာ ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါသိလာပြီး စာကိုလည်း ခုံခုံမင်မင်ရွတ်လာမိပါတော့တယ်။
အခုဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်က (လယ်တီဘုရား ဦးထိပ်ထားလျက်) ဒီစာသားလေးတွေနဲ့ ဆရာကြီးရဲ့အတွေးတွေနဲ့
ထပ်ပေါင်းစပ်ပြလိုက်တော့ အနှစ်အရသာရှိသောစာ၊ ကဗျာတစ်ပုဒ်မို့လို့ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမျှဝေခံစားကြည့်စေချင်
ကျွန်မတို့ အသက်အရွယ်တွေရလာကြပြီဆိုတော့ တရားဘာဝနာလည်းလုပ်ချင်လာပြီ။ဒါပေမဲ့ တာဝန်လေးတွေက
လည်းမပြတ်နှိုင်သေး။ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် က ဒီအတွေးကို ထင်ထင်လင်းလင်းမြင်သာအောင်ရေးစပ်ထားတဲ့
ကဗျာလေးမို့ ကျွန်မ အလွန်နှစ်သက်မိတာပါ။ ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
ခွင့်သာတုန်းမို့ ၊ ရုန်းမည်ကြံလည်း
ကျွန်မတို့ မလိုက်နှိုင်သေး၊ မခဲနှိုင်သေး၊ မရုန်းနှိုင်သေးတွေ အများကြီး ကျန်ရှိနေသေးတယ်မဟုတ်ပါလားရှင်။
ဒီလိုဆီးဆို့ကာနေတာတွေ ဖယ်ဖို့ ရှားဖို့ အလွတ်ရုန်းဖို့ အားထုတ်ကြရင်းနဲ့ နေတောင်ဝင်တော့မှာပါလား။
တီချယ်ရေ ဝေးလျက်ပင် ဆိုတဲ့ အသံလေးကို နားထဲမှာ အကျယ်ကြီး ကြားလိုက်ရသလိုပဲ။
ခုထိ မလိုက်နိုင် လိုက်မမှီနိုင်တာတွေ၊ မခဲနိုင် ၊ မရုန်းနိုင်တာတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း ပိုလိုတောင် များလာသလို ခံစားရတယ်။ တတောင်ထက် တတောင် ပိုလို့တောင် မြင့်လာသလို ပါပဲ။
စကားမစပ်ပါ တီချယ် ဓာတ်ပုံယူသုံးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာကို ဆီမီနာ တခုမှာ တွေ့ခဲ့တာ ။ ကင်မရာတလုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာတွေ့တာနဲ့ နှုတ်ဆက်ရမှာ အားနာလို့ မခေါ်ဖြစ်ခဲ့ဖူး။ မတော်…နှုတ်ဆက်လိုက်လို့ ဘယ်သူလဲခင်ဗျလို့ ပြန်မေးရင် မခက်ပေဘူးလားလို့။
ငိုချင်တာလက်တို့လာပါနဲ့ မဲ့နေသူ ပြုံးအောင်ကူဖို့
တို့မယ်ပုရဲ ့ပခုံးကို ငှားပါလားအေ။
ပြီးတော့ ..သွားရမည့်ခရီးကားဝေးသေး၏ ခြေသာလျှင်ယာဉ်ကုန်ရှိကြကုန်၏..
ဆိုတဲ့..စကားလေးတွေကို သတိရ…ပြီးတော့..ငါသည် ..ငါသည်..ငါသည်..ဝေးသေး၏။( တရားရရန်)
နောက်တော့..ငါသည်..ငါသည် ..မဝေးတော့( သေခြင်းတရားနှင့်..)ဟူသော အတွေးလေးများကို ခံစားမိလိုက်လေတော့သည်…။
တီချာတို့တွေ အသိနဲ့ သတိကပ်ဖို့ (အားမထုတ်သ၍)ဝေးနေတာနော်။
ဒီလိုမျိုး အသိလေး ထားပြီး နေနေနိုင်တာ ဟာလဲ နေ့စဉ် ဘဝ မှာ တန်ဖိုးရှိမယ် ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်အားပေးစကားက တရားရှာ ကိုယ်မှာတွေ့ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
ဒီလို ဆင်ခြေလေးတွေ နဲ့ ဘဲ သံသရာလွတ်ကြောင်းတရား တွေ လွတ်လွတ် ကုန်တာ။
ဒီလို နဲ့ ဓာတ်ပုံထဲ က နေဝင်/ထွက် ပုံလေးတွေ လိုဘဲ ဘဝ တွေ က သံသရာ ထဲမှာ ဝင်လိုက် ထွက် နဲ့။
ဝေးတာကို ဝေးမှန်း သိတာကဘဲ နီးဖို့လို့ မှတ်ထားလိုက်ပြီ တီတီကြီးရေ။
သတိပေး-ကဗျာ လေးအတွက် ကျေးဇူးပါရှင့်။ :-)
ဟား – ပြောရင်း အဲဒီပုံတွေ ကို “ဘဝ” ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ မှာ ဝင်ကြပါလား.
မလတ်ပြောသလိုပဲ၊ (ဘဝ) ဆိုတာလေးကနေဝင် နေထွက်ဖြစ်စဉ်
ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာ တီချာတို့တွေအားလုံး မိုက်မဲစွာ စံနစ်တကျ
ဆရာကြီးရဲ ့ကဗျာတွေ.က ကျွန်တော်တို ့အတွက်..ကျေးဇူးများစွာ..ပေးထားခဲ့တာပါ.။
အခုလို ပြန်လည်..ခံစား…တင်ပြ ပေးလို ့လည်း.ကျေးဇူးပါနော့ ။
တီချာကြီးရဲ့ ပုံလေးတွေက လှပလွန်းလှသလို….
ဝေးလျှက်ပင် စာလေးကလည်း အတွေးတွေ အများကြီးပေးသွားတယ်။
ကျမတို့လည်း ရန်ပေါင်းများစွာ၊ ဆီးဆို့ကာ၍ မရုန်းနိုင်သေးပါဘူး။
လူမှု့ကိစ္စတွေကလဲ အသက်ကြီးလာလေ များလာလေနဲ့
ကိုယ့်စည်းရိုး ကိုယ်တိုင်ကာရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်လှောင်နေမိခဲ့တာကြာခဲ့ပေါ့တီချာရယ်..။
ကိုယ့်ဝန်ထုပ်တွေ ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရင်း တနင့်တပိုးနဲ့ ဝန်ပိနေခဲ့တာလဲ ကြာလှပေါ့…။
တီချာကြီးတို့ အတွက် ဝေးလျှက်ပင်ဆိုရင်တော့
ကျနော်တို့အတွက် ပို၍ …..ပို၍…ဝေးလျှက်ပင်………..
သွားလျှက်နဲ့ ဝေးနေသည်က နိဗ္ဗာန်…….
မလိုက်ရ မဖြစ် ရလေအောင်၊ မခဲရ မဖြစ်ရလေအောင်၊ မရုန်းရ မဖြစ်ရလေအောင် တီချယ်ကြီး ကြိမ်တုတ်နဲ့ရိုက်ပြီ သတိပေးနေသလား လို့တောင် တွေးမိပါတယ်။
တီတီနု..ရေ..့တားတားလည်း မလိုက်နှိုင်သေး၊ မခဲနှိုင်သေး၊ မရုန်းနှိုင်သေးတာတွေ အများကြီး ကျန်ရှိနေသေးတယ်
နေထွက်ချိန်ကနေ စ လို့
အေးခဲ့ ပူခဲ့ နဲ့
ရင်ထဲမှာ သတိတရားတစ်ခု ကျန်နေခဲ့တာတော့
(ကိုယ့်စည်းရိုး ကိုယ်တိုင်ကာရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်လှောင်နေမိခဲ့တာကြာခဲ့ပေါ့တီချာရယ်)
မှန်လိုက်တာ။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ ကိုယ်တိုင်ကိုက မလိုက်ချင်၊ မခဲချင်၊မရုန်းချင်ဘဲနဲ့
ကိုပါပြောသလိုပဲ..ကိုယ့်ဝန်ထုပ်တွေ ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရင်း တနင့်တပိုးနဲ့ ဝန်ပိနေခဲ့တာလဲ
ကြာပြီ၊ တစ်သက်လုံးပေါ့။ ကိုယ်တိုင်တွန်းမချရက်နေတာနော။
တိပိဋကဓရ ယောဆရာတော် မိန့်ကြားတဲ့အတိုင်း မသွားပဲနီးလာသည်က သုသာန်
သွားလျက်နဲ့ ဝေးနေသည်က နိဗ္ဗာန် ဆိုတာတီချာတို့ အားလုံး စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထားရမဲ့
မွန်းတည့်ချိန်မှာနေမဝင်အောင် အားထုတ်ကြရမယ်။ အားထုတ်မှုရှိထားရင် ဘယ်အချိန်
နေဝင်ဝင် ကြောင့်ကျမှု လျော့နည်းသွားမှာပါ။
လေးစားသွားတာနဲ့ မောင်ပေကနေ ကိုပေလို့ ရေးလိုက်မိပါတယ်။
တီချာ့ ပိုစ်မှာ အခုလိုလှလှလေးမန်းပေးတဲ့အတွက် BC ရွေးပါရစေ။
သတိတရားလေးတစ်ခုကျန်ခဲ့ပြီ ဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
အလုပ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ဘယ်လောက်ရရ
လူ ့သက်တမ်းကို မေ့နေကြတာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြန်မြင်အောင်
သံသရာအတွက် သတိရဖို ့
ဖတ်စရာ စာကောင်းတွေနဲ ့
ဆရာမ အား အထူးလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား
ဘီစီ ရွေးခြယ်ပေးတဲ့အတွက်လည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား ။
ကျွန်မကတော့ ဒုတိယအရွယ်မှာ တတိယအရွယ်စိတ်တွေဝင်နေပြီး နေဝင်တော့မလိုခံစားချက်တွေဖြစ်နေပြီ … လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိပေမယ့် မလုပ်ချင်တော့ဘူး … ဘယ်လိုတရားကမှ ကျွန်မကို စိတ်ဓါတ်တက်ကြွလာအောင် နားမချနိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ် … နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာ အိမ်မောကျနေသလိုမျိုးလားမသိပါဘူး ….
ဒီလိုမဖြစ်ရပါဘူးကွယ်။ အသိလေးကပ်ပြီဆိုတာနဲ့ သိစိတ်ကို ဉာဏ်ဝင်လာမှာပါ။
နေဝင်တော့မှာကို သိတယ်၊ ချမ်းမြေ ့တဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ လက်ခံပေးရမယ်။
ဝေတို့အရွယ်မှာ လောကီရောလောကုတ္တရာပါ ဆောင်ရွက်ရင်း စိတ်ကလေးပျော်အောင်
နေပါကွယ်။ လောကီအပျော်တွေမဟုတ်တောင်မှ ကောင်းမှုအပျော်တွေနဲ့ ဖြည့်ပေးပါ။
တီချာဥပမာပြောပြမယ်။ တီချာတို့ အသက်အရွယ်ဟာ နေဝင်ချိန်ကို မြင်နေရပြီဆိုပါတော့။
(၇၅)နှစ်သက်တမ်းဆိုရင် နောက် (၁၂)နှစ်ပေါ့။ ဒီလောက်အသက်ရှည်ချင်မှလည်းရှည်မှာ။
ဒီနေမဝင်ခင်ကာလများမှာ ငါ ဘာတွေလုပ်ခဲ့နှိုင်မလဲဆိုတာ ကနဦးအတွေးပါ။
ကိုယ့်ဖို့ တွေ ရပ်ပြီး သူများဖို့တွေ များများ ပါလာသင့်ပြီ။ ရာဇဝင်မတွင်နှိုင်တော့ပေမဲ့
ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးခဲ့နှိုင်အောင် အားထုတ်သင့်ပြီ။ စသဖြင့်ပေါ့ကွယ်။ သေတတ်ဖို့
တီချာလေ ကိုယ့် Obituary တောင်ရေးထားပြီး သားကိုပြထားတယ်။ အမေသေရင် မင်း
ဒီတော့ ဝေရေ… ချမ်းမြေ ့ပါစေနော်။
အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ တီချယ် …
တကယ်တော့ ရတာမလို လိုတာမရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပါပဲ … (အပျိုးကြီးခံစားချက်လဲ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါတာပေါ့လေ … )
လိုချင်တာကို မရနိုင်ရင် မလိုတာတွေကို မယူချင်တော့ဘူး …
ဘာကိုမှ လေးလေးနက်နက် မခံစားချင်တော့ပဲနဲ့ အလိုက်သင့်ပျော်အောင်နေရင်းကနေ ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ကျရောဂါတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် …
အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားအောင် မင်္ဂလာဆောင်ပစ်လိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့ တွေးမိပေမယ့် …….
“ဓာတ်ပုံဆရာကြီးဦးပေါက် နှင့် ဦးစိန်သော့” တို့ရေ…
ဘာသံမှမကြားပါလား။ ဓာတ်ပုံတွေအတွက် ရပါတယ်။ယူသုံးပါ။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။
စသဖြင့်လည်း ရီပလိုင်း မလုပ်ကြဘူး။
မာမီရေ ကျနော်ကတော့ အချိန်မရှိတော့ဘူးလို့ ယုံကြည်တာကြောင့်
ရသမျှအချိန်လေးမှာ စာရေးပုံရိုက် ရသလောက်လုပ် ရသလောက်တင်နေပါကြောင်း။
ခေတ်စမ်းကဗျာလို့များခေါ်ကြသလားတော့ သိပ်မမှတ်မိတော့ပါဘူး ….
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် ၊ ဆရာကြီး ဇော်ဂျီ တို့ရေးတဲ့ ကဗျာတွေက တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ် ရင်ထဲသိပ်ထိတယ်နော် …
ငယ်သူငယ်ချင်း တောထွက်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ကြီးမိုက်ကို ကဗျာလေး
ဒါပေမဲ့လဲ..ဒီနေ့ထိ ကြီးမိုက် ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူး..
အသက်ရှင်နေတုန်းလေး အခိုက်မှာ လုပ်နိုင်တာကတော့
ကိုယ်ပိုင်တဲ့စိတ်ကို ဖြူစင်ကောင်းမွန်စွာမွေးမြူမှ ဆိုတဲ့
တီချယ်ရေ… တကယ့် အနှစ်သာရတွေပါပဲ။ ဖတ်လို့ကောင်းသလို ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ရဲ့ စာသားလေးတွေကလည်း ငယ်ငယ်ထဲက ခုချိန်ထိ သတိရ အမှတ်ရဆဲပါပဲ။ ခွင့်သာခိုက်မှာ လိုက်ချင်ပါတယ် ရှင်။
1984 ဆိုတော့ရွှေကြည်မွေးခုနှစ်ပဲ။ နှစ်ပေါင်း 28 ရှိပြီပေါ့နော်။ အခုမှဖတ်ဖူးတာ။
တီချယ်လို့ပဲအများခေါ်သလိုခေါ်ပါရစေ တီချယ် ကျေးဇူးပါနော်။ နေဝင်ချိန်ရောက်မှာကြောက်တယ်။
အရှေ့ဆီ ရောင်နီကပြေးပြေး …
ပန်းတစ်ရုံ လွမ်းပုံဆင့် … ပန်းပွင့်ကမွှေးမွှေး ….. ဆိုသလို အရှေ့မှာ ပန်းပွင့်တွေပဲရှိမယ်ထင်နေတာ ၊ နေဝင်ချိန်တွေကို သတိမထားလိုက်မိဘူး ၊ နေထွက်ချိန်ကိုပဲတွေးနေမိလို့ ၊ ခုလိုအမြင်လေးရလာအောင် တင်ပြပေးတဲ့ တီချယ့်ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် … …. ….
တီချယ်ကြီး ရေးပြတဲ့ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ရဲ့ “ဝေးလျက်ပင်” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး ဆရာတော်နဲ့ ဆရာကြီးကို ဦးထိပ်မှာတင်လို့ ကျနော့်လည်း ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို စမ်းပြီး ရေးလိုက်မိပါတယ် ခင်ဗျာ … ။
ဖြည်ထားနိုင်မှ တော်ရာကျမယ် ..
တကယ့်အကျိုး မြင်စေဦးကွယ် …
ဟော .. ဟိုမှာ
နေတောင် ဝင်တော့မယ်ကွယ် …………. ။
ကဗျာလေးကို တီချာ့ ကဗျာစုဆောင်းရေးတပ်ထဲမှာ
နေတောင် ဝင်တော့မယ်ကွယ် ……)
ရင်ကိုလာမှန်တဲ့ လောကရဲ ့ကိုယ်စားလည် မြားတွေပေါ့။
ဆိုပေမဲ့ ဒီဝါကျတွေနောက်မှာ ကိုကြီးမိုက်ရဲ ့
ငယ်သူမို့ မသိပါမဟုတ်ဘဲ သိလာတာအမြတ်ပေါ့ကွယ်။
(အရှေ့မှာ ပန်းပွင့်တွေပဲရှိမယ်ထင်နေတာ ၊
နေဝင်ချိန်တွေကို သတိမထားလိုက်မိဘူး ၊
နေထွက်ချိန်ကိုပဲတွေးနေမိလို့ ၊) ဆိုတဲ့ အတွေးလေးကို
ဒီကဗျာက ကိုယ့်ကို တည့်တည့်ရေးလေသလားတောင်ထင်မိပါရဲ့။
နေ့စဉ် ပဋ္ဌာန်းလေးပူဇော်မယ်။နေ့စဉ် သမာဓိရအောင် တရားထိုင်မယ် ၊
ဘယ်လိုပင် စိတ်တွေကူးပေမယ့် ကိုးနတ်ရှင်လေးခွင့်ပေးတုန်း
(ကုသိုလ်မှတ်တမ်း ပြက္ခဒိန်မှာလည်း ကြက်ခြေခတ်တွေ များလှပါပြီ၊ဒါကြောင့် ဂေဇက်နဲ့တော့ အဆက်ဖြတ်မှဘဲ စဉ်းစားပြန်တော့လည်း အကြိုက်ဆုံးဆုရွေးပေးရအုံးမယ်တဲ့၊တစ်နေ့ကို ၃၆နာရီသာ ဖြစ်စေချင်တော့တာပါဘဲရှင့်)
နောက်ကျစွာ ကွန်းမန့်ပေးမိတဲ့ အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ ။
အခုလို သတိလေး တွေ ပေးပေးနေတဲ့